Banyere Anyị - Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology Co., Ltd.
Zhejiang Wandekai Fluid Equipment Technology Co., Ltd. (nke a maara n'oge gara aga dị ka ụlọ ọrụ Taizhou Wan De Kai Hardware Product Limited), nke hibere na 1995, dị na "isi obodo China" - Zhejiang, Yuhuan, bụ usoro nke imepụta ngwaahịa na mmepe, mmepụta na ire ahịa na azụmaahịa dịka otu nke valvụ ndị ọkachamara (plumbing). Ngwaahịa na-tumadi kewara atọ edemede: ọla kọpa valves, ọla oyiyi akwa, HVAC ngwaahịa. Ọnọdụ ngwaahịa na ọkwa dị elu, ọkwa, na-egosipụta uru gburugburu ebe obibi, bụ North America, Europe na ahịa ndị ọzọ mepere emepe nke ndị na-azụ ahịa.
Company dị ẹdude osisi nke 56000square mita ewu ebe nke 32000square mita, ihe karịrị 500 ndị ọrụ, gụnyere agadi management pesonel karịa 70. The ụlọ ọrụ nwere elu mmepụta ngwá na ule akụrụngwa, including140 tent nke CNC igwe ngwaọrụ, pụrụ iche dị igwe 35 tent, ọkachamara nnwale, ule center 1.
The ụlọ ọrụ mechaa the1994 mbipụta, 2000 mbipụta, 2008 Edition ISO9000 quality management system asambodo; ISO14001 2004environmental management system asambodo na OHSAS18001 - 2007occationation health and safety management system asambodo, ya imewe na mmepe nke PEX management, bọl valvụ, n'akuku valvụ nwekwara karị site North America mba na mpaghara nke NSF, CSA, UPC, UL dị dị ka ngwaahịa asambodo.
AKW HISKWỌ AKW .KWỌ
Na August 5th, n'oge nhazigharị nke ụlọ ọrụ akụ na ụba mkpokọta Yuhuan County, onye nwe ụlọ ahụ nwetara ikike na ikike nke Yuhuan County Longxi ígwè nrụzi.
Iji nweta nrite ọla edo nke "1994 ulo oru ụlọ ọrụ nke afọ 1994" site na-asị ọchịchị na-asị ọchịchị, na June 4th, Yuhuan Longxi ígwè idozi factory na Taiwan Cheng Li ụlọ ọrụ Limited site Share Ltd nkwonkwo ịmalite, guzobere Taizhou wad Hardware Co ., Ltd., ma nweta ikike ibubata na mbupụ.
Na December, na enterprise e ọdịda nke "Taizhou magburu onwe Township Enterprise Award" site Taizhou Township Enterprise Bureau.
Na ọnwa Febụwarị, kọmitii ndị otu pati Yuhuan na gọọmentị mpaghara gosipụtara dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe kachasị elu nke 100 na Yuhuan County na 1996. "Thelọ ahụ kpuchitere mpaghara nke ihe dị ka mita 8658 wee nwee ebe a na-ewu ihe dịka 4950 square mita ( Ugbu a, mmiri kpo oku Department na mbụ Taizhou Wan Kai Kai Hardware Products Co., Ltd.), na e tinye n'ọrụ. The "mmiri management awara njikọ" mepụtara ụlọ ọrụ e ọdịda nke abụọ na-agbata n'ọsọ nke sayensị na nkà na ụzụ ọganihu nke. Yuhuan County ọchịchị na 1997. The "akpaka ubi sprinkler" mepụtara enterprise na-ọdịda nke atọ na-agbata n'ọsọ nke sayensị na nkà na ụzụ ọganihu nke Taizhou ọchịchị ọchịchị na 1997. "
Na Febụwarị, etinyere ụlọ ụlọ nke 939.51 square mita (ugbu a, ngalaba na-ekpo ọkụ mmiri na nke mbụ Taizhou Wan Kai Kai Hardware Products Co., Ltd.).
Egwuregwu PEX, valvụ mgbanaka na valvụ nkuku ndị e mepụtara ma mepụtara site n'aka anyị onwe anyị agafewokwa asambodo ngwaahịa nke NSF, CSA na UPC na mba North America na mpaghara.
ISO14001-2004 asambodo njikwa gburugburu ebe obibi na asambodo OHSAS18001-2007 asambodo oru nlekọta ahuike
O gabigara mbipụta 1994, mbipụta 2000 na asambodo 2008 ISO ISO 1000 maka njikwa njikwa mma.